Sambava Misy mpianatra mihitsoka an-dalana
ANDROHIBE ANTSAHADINTA Olona 29 tratra niditra an-tsokosoko avy any Ambatolampy
Lehilahy miisa 29 avy any Ambatolampy no tratra niditra an-tsokosoko tao Androhibe Antsahadinta omaly. Natao fanadihadiana tao amin'ny kaominina Androhibe Antsahadinta avy hatrany izy ireo niaraka tamin'ireo zandary avy any Fenoarivo.
VATSIM-PIANARANA - ONIVERSITE : Voaloa ny ambiny rehetra
Naloha tamin’ny faran’ny herinandro teo avokoa ny vatsim-pianarana faramparany ho an’ireo mpianatra manovo fahalalana eny amin’ny oniversite-n’Antananarivo.
Fampianarana eny amin`ny anjerimanontolo Ho atao « en ligne »
Tsy maintsy hatao « en ligne” ny fanohizana ny fampianarana eny amin`ny anjerimanontolo raha ny fanapahan-kevitra tapaka tao anatin’ny fivorian’ny COPRIES.
Tao anaty ranomaso no nitalahoan’ireo solontenan’ny Ray aman-drenin’ny mpianatry ny SESAME avy any Antananarivo izay tavela ao anaty alan’i Makoromotra, 80 Km tsy hidirana an’i Vohémar noho ny haratsin’ny lalana.
Mihitsoka fa tsy afaka nanohy ny dia mantsy ny fiara Sprinter nitondra azy ireo avy any Antananarivo, izay niainga ny alahady 22 Martsa lasa teo, hanatitra ireo mpianatra. Ny zava-misy anefa hoy ireo Ray aman-dreny dia mihidy avokoa ny sisintany miditra ny faritra SAVA. Milaza ho nahita fiara 4X4 iray vonona handeha hanavotra ireo mpianatra ireo ny Ray aman-drenin’izy ireo saingy midangana ny saran-dalana ; 100.000 ariary isan’olona vao afaka mandeha raha toa ka misokatra ny lalana. Sahiran-tsaina arak’izany ireo Ray aman-drenin’ireo mpianatra ireo ny amin’ny sakafo sy fahasalaman’ireo zanany satria dia faritra be moka rahateo iny Maromokatra iny. Mpianatra miisa 17, miampy mpanabe 1 sy mpamily 2 izy ireo no tavela ao amin’ilay toerana 14Km tsy ahatongavana ny tananan’i Maromokatra, amin’ny lalam-pirenena fahadimy iny. Manao antso vonjy arak’izany izy ny amin’ny mba hampodiana ireo mpianatra taraiky ireo fa tena mitebiteby tanteraka. Vonona hanaiky ny fandaminana izahay, hoy ireo Ray aman-drenin’ireo mpianatra taraiky ireo, na hatoka-ponenana aza ireo zanany rehefa tonga.